OMG: A gbara m ọgwụ mgbochi na amaghị m ihe dị na ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » OMG: A gbara m ọgwụ mgbochi na amaghị m ihe dị na ya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • ndị mmadụ • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Kedu ihe dị na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa m?
COVID-19 na-alọghachi n'ike. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agwụ na ICU ma ọ bụ na-anwụ anwụ enweghị ọgwụ mgbochi.
Enyere akụkọ a nye ndị niile na-eche na ọ bụghị m.
A gbara m ọgwụ mgbochi na mba, amaghị m ihe dị na ya - ọ bụghị na ọgwụ mgbochi a ma ọ bụ na nke m nwetara mgbe m bụ nwata, ma ọ bụ na Big Mac ma ọ bụ nkịta na-ekpo ọkụ.
Amaghịkwa m ihe dị na ibuprofen ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ, ọ na-agwọ m mgbu.
Amaghị m ihe ọ bụla dị na ncha m, ncha ntutu, ma ọ bụ deodorant.
Amaghị m mmetụta na-adịte aka nke iji ekwentị mkpanaaka.
Amaghị m ma nri m riri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ejiri aka dị ọcha dozie ya.
Amaghị m ma uwe m, ákwà mgbochi, ihe ọṅụṅụ egwuregwu adịghị mma.
Enwere ọtụtụ ihe m na-amaghị na agaghị m ama.
Mana enwere otu ihe m maara:
Ndụ dị mkpụmkpụ, dị nnọọ mkpụmkpụ, ma m ka chọrọ ime ihe ọzọ karịa ka a kpọchie m n'ụlọ m.
M ka na-achọ ịmakụ ndị mmadụ n'atụghị egwu.
Mgbe m bụ nwata na mgbe m toro, a gbara m ọgwụ mgbochi ọrịa polio na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Mụ na ndị mụrụ m tụkwasịrị sayensị obi, ọ dịghịkwa mgbe anyị na-arịa ọrịa ma ọ bụ bufee nke ọ bụla n'ime ọrịa ndị a gbara m ọgwụ mgbochi.
Mgbe ọ bụla m na-anya ụgbọ ala, m na-enyefe ọtụtụ puku ndị bịara abịa ndụ m ma nwee olileanya na ha ga-anọnyere ha.
Ọ na-arụ ọrụ ná ndụ m niile ruo ugbu a!
Enweghị ntụkwasị obi, ọ dịghị ndụ kwesịrị ịdị ndụ ma ọ dịghị ịhụnanya!
A gbara m ọgwụ mgbochi.
Anaghị m ịgba ọgwụ mgbochi iji mee gọọmentị obi ụtọ.
A gbara m ọgwụ mgbochi n'ihi:
* Achọghị m ịnwụ site na Covid-19.
* Achọghị m ịgbasa Covid-19
* Achọrọ m ịmakụ ndị m hụrụ n'anya
* M ka na-anwale onwe m ka m ghara ibufe Covid
* Ọ na-amasị m ibi ndụ m.
* Ọ masịrị m ime Covid-19 bụrụ ebe nchekwa ochie.
* Achọrọ m ichebe anyị.
* Ọ na-amasị m ichebe ndị na-enweghị ike, ya bụ ụmụaka anyị.
A gbara m ọgwụ mgbochi n'ihi na enwere ọrịa ndị ọzọ siri ike nwere ike ịchọ ọgwụgwọ na ngalaba nlekọta ahụike, dịka
ihe mberede, nkụchi obi, kansa
A gbara m ọgwụ mgbochi n'ihi na ọ na-amasị m ịga njem na inyocha ụwa!
Site na anyị niile na eTurboNews na World Tourism Network!
Biko gbaa ọgwụ mgbochi!
Ndị njem nlegharị anya mba ụwa bịarutere na Africa na Middle East
Onye isi ala Sleepout London: Na-agbanwe ndụ na oyi ilu